पाँच वर्षीय एक बालकको छिनिएको हात जोडियो - Dipkhabar - Online News Destination
पाँच वर्षीय एक बालकको छिनिएको हात जोडियो
पाँच वर्षीय एक बालकको छिनिएको हात जोडिएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकले १५ घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर दुर्लभ शल्यक्रियामार्फत छिनालिएको हात जोडेका हुन् । घाँस काट्ने मेसिनमा च्यापिएर दुई टुक्रा भएको हातलाई शल्यक्रिया मार्फत जोडिएको हो ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्लास्टिक सर्जन प्रा.डा. पियुस दाहाल नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले धनुषा जाठीका पाँच वर्षीय बालक कुलदीप मण्डलको छिनिएको दायाँ हात जोडेको हो । शल्यक्रिया गर्ने टोलीमा प्रा.डा दाहालसहित डा. पशुपति पोखरेल, डा. महेश देवकोटा, डा. अपार लामिछाने, एनेस्थेसियालोजिस्ट डा. रुपेश यादवलगायतका चिकित्सक तथा नर्स छन् । १५ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको यो शल्यक्रियामा २५ वटा विभिन्न नसा र हड्डीको संरचना जोडिएको बताइएको छ ।
गत फागुन ९ गते तीन जना बालक खेल्दै गर्दा मेसिनमा परेर मण्डलको हात दुई टुक्रा भएको थियो । हात छिनेपछि बालकलाई तत्काल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगिएको थियो । बालकका आमाबुवा दुवै दिल्लीमा रहेकाले छिमेकीले हातको टुक्रासहित प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगेका थिए ।
बालकलाई जनकपुरमा प्राथमिक उपचार गरी तत्कालै ट्रमा सेन्टर ल्याइएको थियो । समयमा नै अस्पताल ल्याएका कारण हात जोड्न सफल भएको डा. दाहालले बताए । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले पनि उचित प्राथमिक उपचार गरेको हुँदा हात बिग्रनबाट बचेको थियो । फागुन ९ गते राति शल्यक्रिया गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा सफल भएपछि मात्र आइतबार सार्वजनिक गरिएको दाहालले बताए ।-गोरखापत्र दैनिक